Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya Oo Ka Degay Khartuum, Qorshaha Nabadeynta Ee Uu U Tegay Iyo Warbixin Laga Soo Saaray - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaRa’iisal Wasaaraha Itoobiya Oo Ka Degay Khartuum, Qorshaha Nabadeynta Ee Uu U Tegay Iyo Warbixin Laga Soo Saaray
Khartoum (Jigjigaonline) – Ra’iisal wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa gaadhay magaalo madaxda waddanka Sudan ee Khartoum, halkaas oo ay ka taagan tahay xaalad cakiran oo u dhaxaysa milateriga xukunka haya iyo shacabka oo mudaharaadyo dariiqyada la tuban.
Sudan ayaa qas ku jirtay tan iyo horraantii sannadkan, waxaana mudaharaadeyaashu ay xukunka ka tuureen Cumar Xasan Al Bashiir laakiin waxa beddelay saraakiil kale oo ka dhego-adaygaya inay xukunka ku wareejiyaan rayidka.
Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan Golihiisa wasiirrada ayaa magaalada Khartoum waxa kusoo dhaweeyey saraakiisha milateriga ee xukunka haysa, waxaana la filayaa inuu dhex-dhexaadin ka sameeyo khilaafka gilgilay dalkaas.
Abiy Ahmed ayey wararku sheegayaan inuu la kulmi doono horjoogeyaasha mudaharaadyaasha shuruudaha wata ee dhooban dariiqyada iyo milateriga, waxaana uu ka shaqayn doonaa sidii uu uga dhex dhalin lahaa heshiis xasillooni ka abuura dalka.
Qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya, ayaa waxa lagu sheegay in wefti uu hoggaaminayo Abiy Ahmed ay tageen Khartoum subaxnimadii hore, halkaana ay wada-hadallo kula yeesheen madaxa Golaha Milateriga ee sida ku-meelgaadhka ah xukunka u haya Gen Abdel Fattah al-Burhan.
Si kastaba ha ahaatee, lama sheegin inta ay qaadanayso booqashada Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed uu ku tegay Sudan, sidoo kalena lama shaacinin haddii uu ku qancin doono in golaha milateriga iyo mucaaradku ay iskugu yimaaddaan Addis Ababa oo ay heshiis rasmi ah ku gaadhaan.